Sary Mahatalanjon’i Japana Nohavaozina Tamin’ny 3D · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2016 17:21 GMT
“Mpivarotra kofafa. 1892-96 sary lehibe, nolokoina tànana, nataon'i T. ENAMI. Katalaogy Nomerao 584. Avy tamin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Fahazoandàlana: CC BY-NC-SA 2.0.
Mpampiasa Flickr, Okinawa Soba, nandefa rakitsary maro nahitna sary nohavaozina sy nolokoina, nolazainy hoe “hita tao anatin'ireo boatinà korontana, izay nipetraka fotsiny teny an-jorony maizimaizin'ny tranoko”. Ny tena marina, nitetitety ireo fivarotàna entana tonta sy fivarotana entana fahagola i Okinawa Soba (kaonty Flickr tantanin'i ‘Rob’, Amerikana mipetraka ao Okinawa) , mba hitady ireo sary nalain'i T. Enami, ilay Japoney mpisava làlan'ny fakantsary.
Azo jerena ao anaty rakitra 20 anà sary, ao amin'ny mombamomba an'i Okinawa Soba ao amin'ny Flickr ireo sary an-jatony nalain'i T.Enami ary nasiana fanavaozana ; ny tena marina, tena betsaka loatra ireo rakitra ka manome soso-kevitra ny hanombohana ny fijerena ireo sary sy ny mombamomba azy ao amin'ny vohikala rahavavy izy, www.t-enami.org/services. Mampiseho sarinà karatra pôstaly sy sary 3D stereoskôpika avy amin'ny Vanimpotoana Meiji tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 ka hatramin'ny Vanimpotoana Taisho an'ny taona 1920, ireo sary. Teknika nampiasaina hahatonga ny sary ho manana endrika ho mivaingana ny stereoskopia, mahatonga ny fijery sary fisaka iray ho toy ny lalina. Misy rakitra natokana manokana mihitsy ho an'i T. Enami sy ny trano fakany sary.
Sarin'ny Trano fakan'i T. Enami sary, eo amin'ny Làlana Benten, Yokohama ca.1892-3. Avy amin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansan'ny Sary: CC BY-NC-SA 2.0.
Nanomboka nanao ny fakàna sary tany Japana i T. Enami, tamin'ny folo taona faran'ny taonjato faha-19. Vao “nisokatra” tamin'ny andrefana mihitsy i Japana tamin'izany, taorian'ny “bakumatsu”, na ny fiafaran'ny Fotoana Edo ,ny taona 1868.
“vokatra vary tanteraka, nialoha ny fijinjàna. Sary, ca.1897-1900. Avy amin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansa sary: CC BY-NC-SA 2.0.”
Nisy fahalinana lalina tamin'i Japana tamin'ireo firenena rehetra manerantany, izay nampitombo ny filàna tamin'ireo sary, izay nahafahan'i T. Enami nahazo vola hivelomana.
“Doka ho an'ireo fomba fijery stereoskopika an'i Japàna nataon”i T Enami ao anatin'ny The Sears, Katalaogy Roebuck & Co 1908.” Avy tamin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansan'ny sary : CC BY-NC-SA 2.0.
Mikasika ny T. Enami, milaza izao i Okinawa Soba:
Araka ny T. Enami (T mety hoe milaza ny Toshi), izay ‘anarana amin'ny varotra’, na ‘anarana amin'ny maha mpanao kanto’ an'i Enami Nobukuni (江南 信國).
Nahoana izy no tsy nampiasa ny tena anarany ? tsy fantatro. Mandehana anontanio an'i Mark Twain, i Samuel Clemens no tiako ho lazaina.
Amin'ny tranga rehetra, ary amin'ny anarana rehetra, tena ‘mpakasarin'ireo mpakasary’ tokoa i Enami, izay tamin'ny fahatanoràny, tamin'ny faha 20 taonany, efa mpianatra sy mpanampy an'i K. Ogawa, ary mpiasa matianina nilofo fatratra hatramin'ny mandra-pahafatiny tamin'ny faha 70 taonany, ny taona 1929. […]
Mahagaga ahy hoe lehilahy teraka ny taona 1859, nandritra ny vanim-potoana taloha Edo-Bakumatsu tao Japana—sady mety hoe nahazo ny ‘fatotra karavaty tsara indrindra’ amin'ny maha-tanora azy—no lasa olona mpamorona, nandray anjara tamin'ny sarin'ny Gazetiboky National Geographic nandritra ny androm-piainany…ary zavatra betsaka noho izany mihitsy aza.
Mitaraina i Soba hoe tsy mba nahazo ny fankasitrahana tahàka izany nomena ny mpiara-belona taminy i Enami :
Na mbola tsy ankasitrahan'ireo ‘manampahaizana’ ho iray amin'ireo ‘Rat Pack’ malaza misy ireo japoney mpakasary ara-barotra aza, izay ahitàna an'i Shimooka, Ueno, Kimbei, K. Ogawa, Suzuki, Esake, Tamamura ary ireo hafa, dia feno ohatra manandanja sy manabe mihitsy, raha ny fakàna sary voalohandohany no jerena, ny vatan'asan'i T. Enami izay tsy azo tsinontsinoavina velively, ka — na ho tsara na ho ratsy — nanokatra varavarankely ho an'ny tontolo feno fifaninanan'ireo trano fakana sarin'ny vanimpotoana Meiji tao Japana.
Nandefa rakitra sary stereoskopika an'i T. Enami betsaka, misy ireo tontolo manerana an'i Japana i Okinawa, tafiditra amin'izany ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina teratany Ainu, any amin'ilay nosy Hokkaido, any avaratra-atsinanana.
Sary stereoskopika anaty fitaratra, an'ny Ainu, nataon'i T. Enami. Avy tamin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansan'ny sary : CC BY-NC-SA 2.0.
Toa nampiasain'ny governemanta Japoney ihany koa i T. Enami, ary naka sary an'ireo hery Japoney nandeha tany ivelany. Araka an'i Okinawa Soba:
Nanompo ny fireneny tamin'ny taona 1904-05 i Enami, izay mpakasary an'ady ho an'ny Miaramilan'ny Amperora. Nandehandeha be tamin'ireo sehatra rehetra nisian'ny ady izy, naka sary ireo olona tany Shina, Korea, ary ny vava-ady Japoney tao anatiny.
“Sarinà miaramila Japoney tany Shina nandritra ny Ady teo amin'ny Rosia sy Japana — sary stereoskopika tsy fahita firy avy tamin'i T. Enami.” Avy tamin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansan'ny sary : CC BY-NC-SA 2.0.
Notohizan'i T. Enami ny fakàny sary tamin'ny Vanimpotoana Taisho ny taona 1910 sy 1920. Niova tamin'ny fakàna sarinà seho tsara afaka atao karatra postaly ny fomba fiasany, ka lasa maka “sary eny an-dàlana” maneho ny tena fiainana nisy tokoa.
“Ilay fanodinana kofehy kely tao Japana fahiny.” Avy tamin'ny mpampiasa Flickr Okinawa Soba (Rob). Lisansan'ny sary : CC BY-NC-SA 2.0.
Nilaza i Okinawa Soba fa nandritra ny asan'i T. Enami, naverimberina naparitaka nanerana ny tany tontolo ireo asa sariny, amin'ny fampahafantarana an-tsary sy boky torolàlana mikasika an'i Japana; nahazo fankasitrahana manokana avy tamin'ny governemanta Japoney mihitsy aza i Enami tamin'ireo sariny. Ankehitriny, fantatra amin'ireo karazanà sary mitokatokana telo mitondra izao nomerao izao: ca.1892-99 “Sary Lehibe Nampiasàna Albiomina” , ca.1900-07 “Stereoviews”(fijery stereoskopika), ary ca.1912-16 “Sar an-dàlambe, ilay mpakasary malaza. Kanefa, nilaza i Okinawa Soba fa ny katalaogin'ireo sary ao amin'ny karazany roa voalohany ihany no hita hatreto.
Nolazaina fa potika tamin'ny horohorontany Grand Kanto ny taona 1923 ny toerana fakàn'i T. Enami sary tany Yokohama. Maty ny taona 1929 tamin'ny faha-70 taonany ilay mpakasary, ary natolotra ny zanany lahy ireo sariny mangatsakatsaka sisa tavela.
“Ny Hotely Imperialy — Asa kanton'i Frank Lloyd Wright tany Tokyo. Sary Ca.1924-28 avy tamin'i T. Enami. Lafika sary mety hoe nosasan'ny zanany taorian'ny taona 1929.” Sary avy amin'ny www.t-enami.org. CC BY-NC-SA 2.0
Raha ny marina, mamboraka kely ny momba azy ao amin'ny rakitsary Flickr-ny Fikarakaràna, Fanasàna, ary Fitahirizana, i Okinawa Soba, ilay liana manokana amin'ny sary, izay mijanona ho tena talanjona hatrany amin'ny lova navelan'i Enami.
‘Darkroom Guy’ (Mpiasa ao amin'ny efitra maizina), fahiny i Okinawa Soba. Tiako sy mahasarika ahy ny fandrefesana hazavàna, ny porofon-tsary sy ny fanasàna sary, ary ny fitahirizana sary — zavatra tokony eritreretina mialohan'ny hakànao sary mihitsy aza.
2 andro izayThailandy